Fitsaboana radiatera manam-pahaizana momba ny homamiadana - Proton California
Tohanana izay manome tanjaka anao
Izao tontolo izao tsy misy homamiadana ny fahitanay, ary isan'andro ny ekipanay dia manolo-tena amin'ny adinao. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ireo oncologists za-draharaha indrindra amin'ny teknolojia revolisionera sy fitaovana fitarafana, ny California Protons Cancer Therapy Center dia mitondra ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fikarakarana homamiadana manokana ho an'ireo marary. Izany dia mety hiteraka tahan'ny fanasitranana mahery vaika, fihenan'ny voka-dratsin'ny vokatra, fanatsarana ny vokatra ary ho an'ny rahampitso tsara kokoa. Raha te hahita mivantana ianao, azafady mitsangatsangana virtoaly eto afovoanay. Ho fiarovana ny mararin'ny marary, ny mpiasa ary ny mpitsidika dia tsy hampiantrano fitsidihan'ny olona manokana izahay mandritra izao fotoana izao. Raha te hapetraka amin'ny lisitry ny fiandrasana ianao amin'ny hetsika voalahatra manaraka, dia antsoy izahay 858-299-5984.
California Protons Cancer Therapy Center mpiara-miasa amin'ireo dokotera tena tsara mba hanomezana fitsaboana tsy manam-paharoa sy fikarakarana fitsaboana ho an'ny marary. Iray amin'ireo ivon-toeram-pitsaboana tokana roa ao Kalifornia, ary mpamatsy faritra, mpiara-miasa amin'ny California Protons dia miara-miasa amin'ireo dokotera amin'ny rafi-pitsaboana manerana ny fanjakana mba hanomezana ireo mila fitsaboana fitsaboana proton.
Mianara bebe kokoa momba ireo mpitsabo antsika
Ekipa marary maharitra
Ireo manam-pahaizana amin'ny fitsaboana proton.
Fitiavana hikarakarana ny marary.
Raha ny fitsaboana proton dia fitsaboana tsy misy dikany ary matetika tsy mampahory, ny ekipa mpikarakara ny homamiadan'ny marary anao dia hanampy anao hahatsapa ho mahazo aina araka izay azo atao amin'ny dingana rehetra amin'ny lalana, ao anatin'izany mandritra ny fitsaboana isan'andro, ny fivoriana manaraka ary ny fanombanana amin'ny fandrosoana.
Mpitsabo aretin-tsaina dia manofanin'ny ekipa mpitsabo ara-pitsaboana amin'ny fitantanana sy hanomezana ny fikarakarana ny fihetsiketsehana isan'andro.
Dokotera mpitsabo no tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana nomerika ao amin'ny drafitra fitsaboana namboarina izay karakarain'ny mpitsabo ara-pitsaboana.
Mpitsabo oncology voamarina miara-miasa aminao akaiky, ny oncologist momba ny taratra ary ny ekipa mpikarakara hafa.
Dokotera mpitsabo manolo-tena manokana amin'ny fampiharana ny fizika amin'ny fikarakarana ara-pitsaboana, mametaka ny endrika sy ny hamafin'ny andry proton mba hahazoana antoka fa manome ny fatra azo avy amin'ny taratra izany.
Onkolojika momba ny taratra miara-miasa amin'ny fizika mpitsabo mba hamolavola drafitra fitsaboana manokana izay natao tsara ho an'ny marary tsirairay ary mba hahazoana antoka fa ny fitsaboana tsirairay dia omena miaraka amin'ny fepetra avo indrindra.
Ny San Diego Center
Fantatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Miorina ao amin'ny iray amin'ireo vondrom-piarahamonina ara-pitsaboana tampony eto an-tany, ny ivon-tanantsika no ivon'ny fikarakarana ara-pitsaboana, ny fikarohana ary ny biolojia. Ny traikefa ara-pahasalamantsika, ny serivisy faharetana, ny fiaraha-miasa ary ny fanamainana trano dia manohy manintona ny marary avy amin'ny firenena rehetra ary koa manerana izao tontolo izao.
Fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpamatsy mpamatsy vola
Ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny University of California, San Diego, laharana faha-1 ho an'ny onkolojia nataon'ny US News & World Report ny hopitaly tsara indrindra, ary ny hopitaly Rady Children's, laharana faha-10 ambony ho an'ny ankizy manokana, manampy amin'ny fanaovana fitsaboana proton ho zava-misy ho an'ireo mararin'ny taona rehetra.
Ivontoerana fitsaboana fitsaboana iraisam-pirenena
Ny roa ampahatelon'ny marary antsika dia avy amin'ny faritra ivelan'ny faritra San Diego. Betsaka ny dia mivahiny lavitra hatrany Asia, Australia, Middle East ary UK.
Fikarohana mavitrika sy fitsapana klinika misokatra
Ny ekipanay dia manolo-tena amin'ny fanohizana ny fitsaboana amin'ny homamiadana sy ny fikarakarana marary. Amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny Proton Collaborative Group (PCG), California Protons dia mandray anjara amin'ny fandinihana fikarohana marobe amin'ny andrim-panjakana mba hanampiana amin'ny fitsaboana ny fitsaboana proton. Ny lehiben'ny departemanta sy ny oncolojia momba ny taratra dia voarohirohy ihany koa amin'ny fitsapana fikarohana natao an-tsokosoko mampitaha ny fitsaboana proton sy ny taratra X-ray amin'ny alàlan'ny fidirantsika amin'ny NRG Oncology, fikambanana mpikaroka fiaraha-miasa ao amin'ny National Cancer Institute.
Ny ivon-tenanay dia toeram-pitsaboana voalohany any Etazonia izay nametraka ny teknolojia fanodinam-baravarankely misy tariby notadiavina ao amin'ireo efitrano fitsaboana dimy rehetra. Ny famandrihana pinpoint sy fanaraha-maso kalitao avo lenta, ary miaraka amina gantry miolakolaka amin'ny 360 ° amin'ny fitadiavana làlana fitsaboana sahaza, dia miezaka ny hampihena ny fihanaky ny taratra any amin'ny sela mahasalama, ny fihenan'ny voka-dratsiny ary ny homamiadana faharoa, ary ny fanatsarana ny kalitaon'ny fiainana.
Serivisy ho an'ny marary sy serivisy
Ny ekipa serivisy serivisy dia natokana hanampy ny marary sy ny mpitsidika rehetra mandehandeha amin'ny diany ny fitsangatsanganana ny fihetsiketsehana, mijanona ho mifandray ary mahatsiaro mandray.
Mila fanampiana amin'ny fitsangatsanganana ve ianao? Afaka manampy isika.